Baidoa Media Center » War saxaafadeed, odayaasha dhaqanka oo dib u eegis ku sameeyay dastuurka cusub ee Soomaaliya.
War saxaafadeed, odayaasha dhaqanka oo dib u eegis ku sameeyay dastuurka cusub ee Soomaaliya.
July 19, 2012 - Written by admin - Edited byadmin Oday dhaqameedyada ayaa maanta gudbiyay dastuurkii qabya-qoraalka, iyadoo ay la jireen talooyin muhiim ah kuwaas oo gudbin doono ergooyinka qaranka ee ansixinta dastuurka.
Wasiirka arimaha dastuurka iyo dib u heshiisiinta, mudane Cabdiraxman Xoosh Jibriil ayaa soo dhaweeyay tilaabadan muhiimka ah, “Waan ku faraxsan nahay horumarka la sameeyay.
Shacabka Soomaaliyeed waxay sugayaan isbadal, tilaabadan waxay xaqiijineysaa arintaas. Waa inaan wada shaqeynaa si loo helo dibu heshiisiin dhab ah, loona badbaadiyo jiilasha soo socda, dowlad hufan oo shacabka u adeegtana loo hirgaliyo oo ka kooban bulshada qeybaheeda kala duwan.”